နောက်တစ်နေ့စီမံကိန်း "သေစားသေစေသော" အံ့ဩခြင်းအကျင့်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်မည်ဟုမျှော်လင့်သောအရာကိုမဖြစ် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "ဒီလာမယ့်စီမံကိန်း" သေစားသေစေသော "အံ့ဩခြင်းအကျင့်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်မည်ဟုမျှော်လင့်သောအရာကိုမဖြစ် - BGR
နောက်တစ်နေ့စီမံကိန်းအတွက်က "Avengers" အံ့ဩခြင်းအကျင့်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်မည်ဟုမျှော်လင့်သောအရာကိုမဖြစ် - BGR
အံ့ဩခြင်းကြောင့်ယခု MCU အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြေညာဖို့နှစ်ခုသီးခြားဖြစ်ရပ်များလိုအပ် Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါ San Diego မှရုပ်ပြ-Con နှင့်နှစ်ပတ်လည်ပြပွဲ D23 ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကလာမယ့်ဒစ္စနေး + ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဖြန့်ဝေ MCUs အတော်ကြာကန့်သတ်စီးရီးအတူလာမည့်နှစ်နှစ်ကျော်ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြင်ဆင်မှုအတွက်အတော်ကြာဓာတ်ပုံများခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ လာရန်အ Adventures အဘယ်သူအားမျှကဲ့သို့သောကျနော်တို့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းခစျြတျောမူသောပေါ်ပြူလာအံ့ဩခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည် Avengers အုပ်ထိန်းသူများ et ပင့်ကူလူသား - ဤပင် MCU အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဂိမ်း၏တတိယအရစ်ကျနေစဉ် အုပ်ထိန်းသူများ ပြင်ဆင်မှုအတွက်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်, အံ့ဩခြင်း, မိမိ suite ကိုအကြောင်းကိုဘာမျှပြောပါတယ် Avengers5.
ကျနော်တို့ပြီးသားကပြောသည်ပါပြီ ] အံ့ဩခြင်းရိုးရိုးသေစားသေစေသောစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး ဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏အမြတ်အစွန်းပေးထား, ကြှနျုပျတို့ဖြစ်ကောင်းအသစ်တစ်ခု suite ကိုရပါလိမ့်မယ် Avengers အသစ်ကသူရဲကောင်းများအချို့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ကြတခါ။ တစ်ဦးကအစီရင်ခံစာသစ်အံ့ဩခြင်းယခုအမှန်တကယ်အသစ်တခုစီမံကိန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကွောငျးဖျောပွသ Avengers ဒါပေမယ့်သင်ထင်သောအရာကိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
တစ်ချိန်ကပထမဦးဆုံး MCU အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ပေး၏သူအတွင်းဒံယလေသ Richtman, အသစ်တစ်ခုကိုဗျာဒိတ်တော်နှင့်အတူပြန်လည်ရောက်ရှိ မှတဆင့် FullCircleCinema ။ ရသည်မှာ, Disney နဲ့အံ့ဩခြင်းမယ့်တီဗီစီးရီးအပေါ်အလုပ်လုပ်နေကြ Young က Avengers အဆိုပါအံ့ဩခြင်းဠာထဲမှာငယ်ရွယ်စူပါဟီးရိုးအချို့ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်အရာဒစ္စနေး + ။ Richtman အဆိုအရ, ထို့နောက်သူတို့လူတိုင်းနဲ့တွဲပြီးကြီးထွားနိုင်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် MCU ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပေါ်လာပါသည်။
ကျနော်တို့သေး Young က Avengers ၏ဤအဖွဲ့သည်ပေမယ့်စီးရီး join မည်သူမသိရပါဘူး Hawkeye သော4ဇာတ်စင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏အစားထိုး, ကိတ်ဆရာတော်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်-Man ၏သမီး, Cassandra Lang ကျနော်တို့ပြီးသားအတွက် 2023 အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ထို့အပြင်အသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထဲမှာတိုနီ Stark ၏စျာပနအခန်းအနားမှာပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သူတစ်ဦးအခြို့သောလုလင်ကိုဖော်ပြခြင်းမ နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ အရာလည်းမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာလူငယ်တစ်ဦးသေစားသေစေသောဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယခုဤဘို့ပဲထင်ကြေးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမှတပါး, Richtman ဖြစ်ပါသည် တောင်းဆိုဖို့မပထမဦးဆုံးအတွင်း Young က Avengers ၏ Adventures ကို ပြင်ဆင်မှု၌ရှိကြ၏။ ဤအရာကားဂိမ်းငါတို့စကားကိုနားထောငျပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါသည် Avengers ကန့်သတ်ထုတ်ဝေဒစ္စနေး + အဖြစ်ရုပ်ရှင်တွေပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူငယ်ပေးမယ့်ကန့်သတ် Avengers ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးထိုသူအပေါင်းတို့အဘို့ရုပ်ရှင်ရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မယ်။ လာမယ့် Thanos ခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့်ကိုအဆိုပါ MCU တာမျိုးမပြုမီဤနည်းအား, ငါတို့ကောင်းကောင်းသမျှသောဤအသစ်သောဇာတ်ကောင်တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။
ဒစ္စနေးသို့မဟုတ်အံ့ဩခြင်းဤအဆင့်မှာဘာမှအတည်ပြုမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ သူတို့ကရှိပြီးသား4အဆင့်များစွာကိုစီမံကိန်းများကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပြီးအခြားစီမံကိန်းများထုတ်လွှတ်မှုနှင့်လက်ရှိရုပ်ရှင်အပြင်၌နေသောမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ လာမယ့်ကြီးမြတ်ရုပ်ရှင်သည် Avengers အစီရင်ခံစာမကြာသေးမီကအံ့ဩခြင်းဖြစ်ကောင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူကပြောပါတယ် Avengers နှင့် X-Men အကြားကြီးမားတဲ့ crossover Avengers5.
။ ရင်းမြစ်: အံ့ဩခြင်းစတူဒီယို
BGR - ဒီနေရာတွင် Apple ကတီဗီ + အပါအဝင် $ 60 / လများအတွက်ရနိုင်သမျှသောနဖူးစည်းစာတမ်းတွေများမှာ